Logi BLOK no tranga farany ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Logitech dia nanambara fantsom-baovao vaovao antsoina hoe "Logi", ny vokatra BLOK ho an'ny iPad no vokatra voalohany natomboka tamin'ny marika vaovao. Ny Logi Blok dia tranga miaro mafy, amin'ny loko maro karazana ary miaraka amin'ny endrika manana zoro izay manampy keyboard ho an'ny iPad anao ary amin'izany dia azonao atao ny manao azy ho zavatra akaiky indrindra eny an-tsena amin'ny Microsoft Surface. Ity karazana fonony vaovao ity dia tsy isalasalana fa fitaovana hoentina handraisana ireo mpampiasa iPad maro.
Ny fianakaviana Logi BLOK dia misy ny Logi BLOK Shell, izay misy ny boaty miaro sy ny klavier izay ampiarahina amin'ilay tranga sy ny iPad. Ny famolavolana zoro maranitra dia natao hiarovana ny zoro boribory amin'ny iPad araka izay azo atao. Araka ny voalazan'i Logitech dia voaomana ity tranga ity ka afaka milatsaka amin'ny haavony 1,83 metatra ny iPhone (6 metatra amin'ny fanandramana), amin'ny sehatra matevina toy ny beton nefa tsy mahazo iPad na dia kely aza ny iPad, nefa tsy lehibe sy mavesatra. Na izany aza, efa fantatsika fa ny fianjeran'ny tsirairay dia izao tontolo izao.
Ireo kinova roa amin'ny tranga Logi BLOK dia mitovy amin'ny azy, ny hany maha samy hafa azy dia ny fiheverana lafo kokoa dia misy fijoroana hampiatoana ny iPad ary miaraka amin'izay koa dia fonony miaro ny efijery. Ny fanontana tsy nasiana padded dia azo alaina ho an'ny iPad Air 2 sy iPad Mini ho an'ny faharoa ary fahatelo ho an'ny $ 39,99, na izany aza ny kinova pad sy stand ho azo alaina amin'ny iPad Air 2 amin'ny vidin'ny $ 69,99, izay raha raisintsika ny vidin'ny fonony hafa dia tsy dia lafo loatra.
Ho fanampin'ity tranga ity, Logi BLOK dia manolotra kitendry feno azo zahana amin'ny loko marobe amin'ny $ 129,99 Ny lokony dia manga, manga - mena sy mainty - volomparasy. Ireo tranga ireo dia efa misy ao amin'ny tranokala Logitech ofisialy manomboka anio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Logi BLOK no tranga farany ho an'ny iPad anao
TaiG dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kinova 2.4.3. Tsy misy famantarana ny kinova Mac